धनुषाको सबैला नगरपालिका मेयरका उम्मेदवार बीपी साह को हुन् ? - News Madhesh
धनुषाको सबैला नगरपालिका मेयरका उम्मेदवार बीपी साह को हुन् ?
जनकपुरधाम, २५ चैत । डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिकाको मेयरमा बीपी साहलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
जनमत पार्टी सबैला नगर समितिले साहलाई सर्वसम्मत रुपमा मेयरमा उठाउने निर्णय गरेपछि डा.राउतले स्वयम् आफ्नो फेसबुक पेजबाट साहको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
३१ वर्षीय बीपी साह त्रिभुवन विश्विद्यालय केन्द्रीय विभागबाट एमए र नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंबाट एलएलबी गरेका हुन् । सँगै उनले राजनीतिशास्त्रमा बीए पनि गरेका छन् ।
विगत १५ वर्षदेखि पत्रकारिता गरेका साह झण्डै १२ वर्ष काठमाडौंमा बसेर संघीय संसदको संसदीय एवं राजनीतिक पत्रकारिता गरेका हुन् ।
रेडियो नेपाल, भारतीय टेलिभिजनलगायत कयौं मिडियामा काम गरेका साहले नेपालमा दर्ता हुने पहिलो अनलाइन न्यूजपोर्टल हुलाकी न्यूज डटकमका सम्पादक पनि हुन् ।
सबैला नगरपालिका वडा नम्बर १२ रघुनाथपुर घर भएका साह किसान परिवारमा जन्मेका हुन् । तीन भाई बहिनी मध्ये सबभन्दा कान्छो बीपी साह सुरुवाती कालदेखि नै सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । रघुनाथपुर सेवा समाजका अध्यक्षसमेत रहेका साहले न्यायका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय भएर पटक पटक प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन् ।
आर्थिक रुपमा विभिन्नहरुका लागि सामाजिक संस्थामार्फत उनले सहयोग गर्दै आएका छन् । प्रहरी हिरातमा संकास्पद मृत्यु भएका शम्भू सादा र अस्पतालको बेडमा छटपटिएर मृत्यु भएका राजु सादालगायतको घटनामा दोषीलाई कारवाही गराउन भएको आन्दोलनमा उनी नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए ।
निडर स्वभाव र सहयोगी भावनाका साह जनमत पार्टीमा स्थापना कालदेखि नै आवद्ध छन् । समाज परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोण र समाजसुधारको अभियानमा उनी अगाडि छन् ।
धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका शिक्षित एवं व्यवसायिक नगरी भएकोले डा.सीके राउतले शिक्षित एवं स्वच्छ छबीका युवा बीपी साहलाई उम्मेदवार बनाएका हुन् । आन्तरिक सवेक्षणले बीपी साहले मेयरमा चुनाव जित्ने देखाएपछि जनमत पार्टीले उनलाई उम्मेदवार बनाएको दाबी गरिएको छ ।
प्रकशित मिति : 2022-04-08